Usuku lwalahleka uthando: isahluko sokugcina sika-Javier Castillo's bilogy | Izincwadi Zamanje
Umthombo Usuku Lothando Belulahlekile: I-Apple
Uma ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sikutshele ngakho incwadi Ngosuku alahlekelwa ingqondo ngalo, kulo mcimbi nokuqeda i-biology oyithola nalezi zincwadi, sifuna ukuphawula nawe Usuku lwalahleka uthando, ingxenye yesibili ephela, yize kunokunye okungaziwa, kumlando walaba balingisi.
Uma usufundile Usuku Olahlekile Ngayo futhi usuvele ucabanga ukuqala owesibili, ungakwazi. Kepha uma ingakudonsanga ukunaka kwakho futhi awukakunikezi ithuba, kungahle kube yisikhathi sokuthi ubheke lokho esesikulungisile ukuze wazi ukuthi uzotholani.
1 Ubani umbhali wosuku uthando lwalahleka
2 Yini okufanele uyazi ngaphambi kokufunda Usuku okwalahleka ngalo uthando
3 Imayelana nani
4 Abalingiswa boSuku Lothando Babelahlekile
Ubani umbhali wosuku uthando lwalahleka
Njengencwadi ngaphambili, Usuku okwalahleka ngalo uthando lubhalwe nguJavier Castillo. Futhi, ngenkathi ekhipha inoveli yokuqala, washiya kuvule ithuba lokuthi kube nengxenye yesibili uma ebona ukuthi iphumelele. Ngakho-ke, ngenkathi kuthengwa amalungelo kuye futhi nencwadi yokuqala yashicilelwa kabusha, ngesikhathi esifushane ingxenye yesibili ayeyihlanganisile yavela.
Eqinisweni, kufanele wazi ukuthi uJavier Castillo wayengumeluleki wezezimali futhi, ngemuva kokuphumelela ngezincwadi zakhe, wayishiya futhi wagxila ngokuphelele kulowo msebenzi wezincwadi omnikeze impumelelo enkulu.
Eyokugcina yezincwadi esezikhishiwe ivela kulo nyaka ofanayo, iThe Soul Game, lapho ilandela khona isimo sayo sokulandisa, ilula futhi iyajabulisa (uma usuqonda "umdlalo" owulethwa umbhali phakathi kwangaphambilini nanamuhla).
Yini okufanele uyazi ngaphambi kokufunda Usuku okwalahleka ngalo uthando
Umthombo: IPenguin Chile
Yize usuku olulahlekile uthando lungafundwa ngaphandle kokufunda olokuqala, kunemikhakha ethile elahlekile uma uyenza kanjena. Izinhlamvu ziyakhiwa encwadini yokuqala, ngakho-ke uma uzifunda, ziwuhlobo olungaphelele. Manje, kuyiqiniso futhi ukuthi okwenziwa ngumbhali ngale ncwadi kucishe kube "yikhophi" (esizokhuluma ngakho ngokulandelayo).
Ngokubona kwethu, Ukuze uqonde ngo-100% incwadi ethi The Day that Love Was Lost, kufanele ube nomlando kusukela phambilini, yazi ukuthi kwenzekeni nokuthi kungani incwadi iqala ngaleyo ndlela (futhi ayikunaki). Ngaphezu kwalokho, ngokuba nolwazi lwezinhlamvu, kukuvumela ukuthi ugxile kokusha. Usuvele uyazi ukuthi banjani abanye, ngakho-ke ukwazi okuningi ngomlingiswa othile kuba yinjongo yakho.
Manje, kuthiwani uma ungafundi eyokuqala? Yebo, ngandlela thile, akukho okuzokwenzeka; okusho ukuthi, kunezinto ongaziqondi kepha zicishe zibe zincane, ngoba zombili lezi zincwadi ziyafana kakhulu futhi, ngokwazi kakhulu, zingagcina zibikezela.
Ngokuqondene nalokho okufanele ukwazi, okubaluleke kakhulu yilokho abalingiswa abasemqoka 'abakwembulayo' esakhiweni esisencwadini yokuqala (nokuthi asifuni ukukuveza) njengoba kuyinjini yezimpande yaleyo ngxenye yesibili. Futhi abalingiswa, ikakhulukazi uJacob nochwepheshe we-FBI, okubaluleke kakhulu. Njengomuntu "omubi" osendabeni, yize kungcono singadaluli lutho ngencwadi yokuqala.
Usuku olulahlekile lolo thando luqala njengaphambi kwalo, ngomuntu onqunu ophethe into esabekayo ngesandla sakhe. Lapho esemmisile, kubonakala sengathi wazi okuningi kunamaphoyisa, futhi kulapho umdlalo uqala khona, phakathi kwesikhathi esedlule nesamanje, kulandela umugqa ofanayo, ukuthola u-Amanda, indodakazi kaSteven nentombazane uJacob bathandana. Kepha lokho esikhathini esedlule, ngoba esikhathini samanje sizoba nalabo balingisi kanye nabanye abaxhumana futhi badalule imininingwane emisha.
Mhlawumbe okufunwa kakhulu ngumfundi yilokho okwenzeka ngomunye umuntu, futhi yingakho noma ngubani ofunda ingxenye yokuqala eqala ukuziphindaphinda ngalesi sekhondi.
Okusha ozokuthola ukuthi, kule ncwadi yesibili, isahluko ngasinye siphethwe yigama lomunye wabalingiswa abaqavile (abafundi abaningi bakhononda ngoba eyokuqala ibimapeketwane futhi umbhali ebhekane nenkinga ngale ndlela).
Abalingiswa boSuku Lothando Babelahlekile
Abalingiswa boSuku lothando balahlekile Ziyafana Nosuku Alahlekelwa Ngalo Ingqondo Yakhe. Kepha futhi sikhuluma ngobuso bethu obuzohambisana kakhulu nesakhiwo. Lezi izi:
I-Bowring Bowring: Ungumhloli we-FBI, ukhathele impilo yakhe yansuku zonke futhi ukhungathekile ngokungalifezi iphupho lakhe lokuba isazi sobugebengu.
Leonard: umsizi ka Bow Bow Bowring.
UKatelyn goldman: Imayelana nentombazane eyanyamalala eminyakeni eyedlule, elinye lamacala okuqala omhloli abangakaze bathole. Ubheka ukwehluleka.
Jack: ungubaba kaKatelyn.
Umbukiso: ngumuntu oqala indaba, owesifazane onqunu othi uyazi ukuthi kuzokwenzekani. Ngakho-ke kuhlanyisa umhloli.
Zonke lezi zinhlamvu zizophinde zihlanganyele nalabo esibaziyo, ngakho-ke kunabaphikisi abaningi, abakhulu nabesibili, okuzofanele ubalandele.
Imibono kule ngxenye yesibili ingeyakho konke ukuthanda. Kukhona labo abayithandile, ikakhulukazi ngoba ingena ijule emininingwaneni eyayikhululekile encwadini yokuqala; futhi ngubani ongayithandanga ngoba ilandela iphethini efanayo neyokuqala futhi, ngakho-ke, 'ilahlekelwa ngumusa wayo'.
Uma ukuphela kosuku alahlekelwe yingqondo yakhe akukwenzi ufune ukwazi kwenzekeni kumlingiswa othile, noma uma ungasizwa leso sidingo, kungcono ungasifundi bese ulinda isikhashana ukuthatha ukufunda ngenjabulo enkulu. Ngaphandle kwalokho ungahle udumazeke.
Uma ufuna ngempela ukufunda, kwenze, ikakhulukazi ngoba uzothola okwenzekile kuwo wonke umndeni, nokuthi kuzokwenzekani esikhathini sakho samanje. Yize kufana nokwokuqala, kunemininingwane ekwenza uqhubeke uvule amakhasi kuze kube sekugcineni (okuthi, njengabo bonke lo mbhali, kungabikezeli, okungenani uze ube sekupheleni ekugcineni).
Usuyifundile vele? Ubucabangani Ngosuku lapho uthando lwalahleka?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Usuku okwalahleka ngalo uthando